၂၀၀၈ က စခဲ့သည့် အစာလမ်း တွယ်ဆက်တစ်သျှူးကင်ဆာကို လေးကြိမ်တိုင်တိုင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သူ ဒေါ်ခင်သန္တာလင်း
အိပ်ရာထဲ အကြာကြီးနေရင်း အဆစ်ခိုင်သွားခြင်း (Joint Contracture)
ခေါင်းမူးခြင်း ဝေဒနာအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခေါင်းမူးတာက ယာယီဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ဆီ သွားမပြနိုင်သေးချိန်မှာ ခေါင်းမူးတဲ့ ဝေဒနာသက်သာသွားဖို့ရာအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေနဲ့ ကုသလို့ ရပါတယ်။ ရေသောက်ပါ ခေါင်းမူးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုက ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်လို့ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါကြောင့် ခေါင်းမူးပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးလုပ်သင့်တာက ရေတစ်ဖန်ခွက်သောက်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။...
အချစ်တော် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများ မွေးမြူထားလျှင်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အချစ်တော် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင်ကို သင့်အိမ်မှာ မွေးမြူထားပြီးပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် သင်လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ (၁) ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးပါ သင့်လိုပဲ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာလေးတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဆစ်ရောင်တာ၊ နှလုံးထိခိုက်တာ၊...
ကျန်းမာရေးမှာအစားအသောက်က အဓိကကျလို့ သင့်တင့်မျှတအောင်စားလေ့ရှိတဲ့ အာဇာနည် နှင့် ၀မ်းမိသားစု
မေး ကိုအာဇာနည်ရဲ့လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေ သိပါရစေ။ ဖြေ ကိုအာဇာနည်ကတော့ သီချင်းတွေ ဆိုနေပါတယ်။ နယ်ရှိုးတွေရော ရန်ကုန်ရှိုးရော ဆိုဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ကြော်ငြာတစ်ခုလည်း ရိုက်ထားပါတယ်။ မေး ဒီနှစ်သင်္ကြန် ဘယ်မှာရှိဖို့ များပါသလဲ။ ဖြေ ကိုအာဇာနည်က ဒီနှစ်သင်္ကြန် တယ်လီနောမိုဘိုင်းမှာ...
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အာဟာရ ဓာတ်တွေရရှိစေပြီး သင့်ဘ၀ကို ကောင်းကျိုးပြုနိုင် မယ့် စူပါအစာတွေကို မမေ့မလျော့ စားသင့်ပါတယ်။ – မင်းကွတ်သီး မင်းကွတ်သီးဟာ သွေးကင်ဆာရောဂါသည် တွေမှာ ကင်ဆာဆဲလ် သေဆုံးမှုကို အားပေးပါတယ်။ – စောင်းလျားသီး စောင်းလျားသီးမှာ ဗီတာမင်ဘီနဲ့...
ရင်သားကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာအောင် . .
မီမိုး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါအမျိုးမျိုး ကိုသာမက ရင်သားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာ တွေကိုပါ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှု လုပ်ပါ BRCA mutation ဖြစ်တာကြောင့် ရင်သား ကင်ဆာနဲ့...
တစ်နေ့တာလုံးရုံးခန်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ကြာလာတဲ့အခါ စိတ်ရောကိုယ်ပါပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးတက်ရတဲ့နေ့တွေက ပင်ပန်းပြီးပျင်းရိမနေစေဖို့ အလုပ်လုပ်ချိန် နာရီဝက် – တစ်နာရီကြာတိုင်း မတ်တတ်ရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပေးပါ၊ ရေထသောက်ပါ၊ ဖုန်းပြောပါ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောပါ . . ဒီအကျင့်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ကို...
သွားကျန်းမာစေမည့် အစာ . . .
– နွားနို့ နွားနို့မှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် သင့်ခံတွင်းကို သွားဖုံးရောဂါမရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – ဆယ်လ်မွန်ငါး ဆယ်လ်မွန်ငါးမှာ ဗီတာမင်ဒီပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူပြီး အသုံးပြုနိုင်စွမ်း ကောင်းစေပါတယ်။ – လိမ္မော်သီး လိမ္မော်သီးဟာ သွေးကြောတွေကို သန်စွမ်းကျန်းမာစေပြီး သွားတွေထဲက...
၊ ကိုထက် ၊ ကားမောင်းတဲ့အခါ၊ စာရိုက်တဲ့အခါ၊ စာရေးတဲ့အခါ၊ ဟင်းချက်တဲ့အခါ၊ ပန်းချီဆွဲတဲ့အခါ . . ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အများအားဖြင့်လက်တွေကို အားထားနေရတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ကြွက်သားတွေသန်စွမ်းပြီး လက်ဆစ်နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုမရှိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လက်တွေ သန်စွမ်းနေစေဖို့ ရိုးစင်းလွယ်ကူတဲ့ လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို...
နွေရာသီပူပြင်းချိန်တွင် သတိပြုလိုက်နာသင့်သည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပူစပ်သည့် အစားအသောက်များ ရှောင်ပါ ပူတဲ့ရာသီမှာ အပူအစပ်တွေရှောင်ရပါမယ်။ အဲဒီအစားအသောက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ကို မြင့်တက်စေတဲ့အတွက် အပူအစပ်လွန်ကဲတဲ့ အစားသောက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ယင်နားစာများ ရှောင်ပါ ရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တတ်တဲ့...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆီးချိုရောဂါအပါအ၀င် ကူးစက်မဟုတ်သောရောဂါများ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းအချက်များ
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း မေး ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုရောဂါ အပါအ၀င် ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအ ချက်တွေကို ဘယ်လို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်းနဲ့ ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ရောဂါတွေ...
Page 513 of 593« First‹ Previous509510511512513514515516517Next ›Last »
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာကို အနိုင်ယူခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီး ဆိုဖီယာဗာဂရာ
နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးချိန်မှာ ဆီးစိမ့်ထွက်နေလျှင်
နောင် ၁၀ နှစ်ကြာချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေးဇူးတင်နေမယ့် အလှအပအကျင့်ကောင်း ၁၀
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဖောလစ်အက်ဆစ် လိုအပ်နေသည့် လက္ခဏာ (၇) ရပ်
အခြားရောဂါရှိသူအား မျက်စဉ်းဆေးနှင့် မျက်စိကုသဆေးပေးလျှင်
ဂျူးမြစ်၊ ဂျူးဖူး စားသင့်ပါသလား
ကော်ဖီက ကောင်းတာလား၊ ဆိုးတာလား